Discourses in Media, Globalization & Culture: बुढो रुखको आत्महत्या (भाग २)
उपस्थित अन्य सबै कमरेडहरुले तालीको गडगडाहटले उनका कुरालाई स्वागत गरे । विवाह गर्ने जोडीले एकार्कालाई अबीर लगाइदिएर हात मिलाए । सबैले ताली बजाए । शायद विवाह सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि विवाहित दुवैले छोटो मन्तव्य दिए । उनीहरुको भाषणमा क्रान्तिप्रतिको प्रतिवद्धता, सधैँ एक रहने प्रण र असमानता अन्त्यका लागि जीवनपर्यन्त लडिरहने प्रतिज्ञा थिए ।
यो बाटो हुँदै थुप्रैपटक जन्तीहरु हिँडेको देखेको छु मैले । कोही बाजा बजाएर जान्थे । अक्शर दुलही रोएको पाउँथेँ तर दुलाहा भने युद्ध जितेर आएजस्तो देखिन्थ्यो । मेरै छेउमा आएर जन्तीहरु गुनासो गर्थे । कहिले दाइजो कम भएको, कहिले दुलाहाले दुलहीलाई कम गहना वा सस्तो कपडा ल्याइदिएको , कहिले टीका लगाएर पैसा कम दिएको आदि । खानामा मासु नभएको वा घीउ कम भएको जस्ता नीच गुनासो पनि गर्थे । तर आजको विवाह भने अद्भुत थियो । शायद जीवनमा पहिलोपटक मैले यस्तो विवाह देखेको थिएँ । न जातभात, न चिनाचपटी, न सामाजिक ढोँग, न आर्थिक लेनदेनको झगडा, न दुलही रोएको, न जन्तीको लर्को नै । मलाई आजैका दिनमा मेरो उपस्थितिले अर्थ पाएजस्तो लाग्यो । यस्तै राम्रा काममा आफ्नो पनि उपस्थिति रहोस् र छहारी दिइराख्न पाइयोस् भन्ने लोभ पनि मनमा पलायो । मैले सोचेका मुक्तियोद्धाहरुले अबचाहिँ समाज परिवर्तन गर्छन् भन्ने पक्का भयो ।
त्यसको लगत्तै देशमा प्रजातन्त्र आएको र बिद्रोहीहरु शहर पसेको सुनेँ । यस्ता दृश्यको अझै साक्षी बस्ने मेरो अपेक्षा पुरा हुन पाएन । सोचेँ अब खुल्लमखुला गाउँगाउँमा यस्ता विवाह भइरहेका होलान् । किन लुकेर मेरो छहारीमा आएर बिहे गर्नुपर्थ्यो र? म सन्तुष्ट थिएँ । तर हिजोको घटनाले भने मेरो भ्रमका सबै पर्दा च्यातिए ।
रातिको १० बजेको हुँदो हो । एकजना महिला मेरो छेउमा आइन् । जुनेली रात भएकोले मैले उनी निशा कमरेड नै भएको ठम्याउन सकेँ । यसअघि गाउँकाले भनेको सुनेको थिएँ कि कमरेड भिक्टर साँसद बनेका छन् रे । काठमाडौँतिरै रहन्छन् । अनि निशा भने पार्टी कामका लागि गाउँमै छिन् । लडाकुहरु क्याम्प बस्दासमेत उनी भलाद्मी र मिलनसार भएकोले गाउँमै राजनीति गर्न सहयोगी हुने भन्दै क्याम्पमा नपठाउने निर्णय गर्यो पार्टीले । पार्टी अनुशासनलाई उनले सहर्ष स्वीकारिन् । भर्खरै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको र दाम्पत्य जीवनको शुरुवातमात्र गरेको अवस्थामा आएको बिछोडलाई पनि उनले पार्टीको लागि स्वीकारिन् । गाउँमै पुर्णकालिन कार्यकर्ताको रुपमा रहिन् र राजनीतिमै आफुलाई होमिन् ।
देशमा संविधानसभाको चुनाव आयो । गाउँमा उनका श्रीमान्को भन्दा उनकै बढी स्वीकार्यता हुँदा पनि पार्टीले कमरेड भिक्टरलाई टीकट दियो । उनले दिनरात परिश्रम गरिन् । आफ्नो दलबाट आफु वा कमरेड भिक्टर वा अरु कमरेड जो नै भएपनि केही फरक पर्दैन । सबैले जनताका लागि केही न केही गर्नेछन् भन्ने बिश्वास गाउँलेहरुलाई दिलाईन् र कमरेड भिक्टर नै बिजयी भए । चुनावका क्रममा भएको श्रीमान् सितको केही समयको सामीप्यता फेरी टुट्यो । श्रीमान् शहर फर्के, उनी गाउँमै रहिन् ।
समय बित्दैजाँदा पार्टीले पनि बिस्तारै साथ छोड्दै गयो । होलटाइमर बस्ने क्याम्पहरु हट्दै गए । समाज पनि बदलियो । पार्टीले केन्द्रतिर जोड दिन थालेपछि गाउँका सँगठन र समर्थकहरु छिन्नभिन्न हुन थाले । उनी समस्यामा पर्दै गइन् । अनि घर नफर्की भएन । अरु पुर्णकालिन कार्यकर्ता जस्तै उनी पनि निराश मुहार लिएर घर फर्कने निर्णय गरिन् ।
घर भनेपछि वैवाहिक मान्छेको लागि आफ्ना पतिकै घर न हुन्छ । उनी पनि चैतको फुङ्ग उडेको दिनको मध्यान्हतिर पतिको घर पुगिन् । त्यहाँ उनले नसोचेको भयो । सासुससुरा र देवर मिलेर उनलाई घरमा पस्नै दिएनन् । केके भने के के । छिमेकीहरु आएर पनि केवल रमिते बने । उनले आफ्नो घर दाबी गर्ने सम्भावना घट्दै गएपछि अन्तिम भरोसा कमरेड भिक्टर थिए । उनले फोन गरिन् । फोनमा आफ्ना पतिसित कुरा गर्न समेत उनले केही समय कुर्नुपर्यो । किनकि उनी त अहिले साँसद भएका थिए र सोबापत पाउने सुविधास्वरुप जिल्ला सदस्यको हैसियत राख्ने कमरेड सीमालाई उनले पीए राखेका रहेछन् । सीमाको दयास्वरुप बल्लबल्ल उनले श्रीमानको बोली सुन्न पाइन् । श्रीमानबाट त भरोसा होला नि भनेर उनले हिम्मत हारेकी थिइनन् । तर फोनको उतापट्टिबाट भने त्यस्तो हिम्मतिलो जवाफ पाइनन् । उनले भने, "कमरेड कतै मिलाएर बस्दै गर्नुस्, केही दिनमा म आउँछु र मिलाउँछु । नआत्तिनुहोला ।" उनको मनमा चिसो पस्यो तर आफ्ना पतिमाथि शंका गर्न मन लागेन । उनी कहिले कुन कामरेडकहाँ र कहिले कसकोमा गर्दै दिन कटाइन्, कमरेड भिक्टरको प्रतीक्षामा । आवतजावत गर्दा कहिलेकाहीँ मेरो छहारीमा आएर पनि गुनासो पोख्ने गर्थिन् । तर उनका साथीहरु पनि आआफ्नो ध्याउन्नमा लागेकाले उनका कुरामा त्यति ध्यान दिँदैनथे वा फोस्रो आश्वासन दिन्थे कि कमरेड भिक्टर फर्केपछि सबै ठीक हुनेछ ।
केही दिनमा आउँछु भनेका कमरेड भिक्टर ठीक दुई महिना तीन दिनपछि गाउँमा टुप्लुकिए । उनलाई आशा थियो कमरेड भिक्टर पहिला आफुलाई नै खोज्दै आउलान् भन्ने । तर त्यसो भएन । उनी सरासर आफ्नो घर गए । उनी पनि हस्याङफस्याङ गर्दै 'घर' पुगिन् । त्यहाँको एउटा घटनाले भने उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भइन् । त्यहाँ त उनको ठाउँमा अर्कै दुलही भित्रिँदै थिइन् । मान्छेको ठेल्लमठेल थियो । उनले प्रतिरोध गर्न खोजेजस्तो गर्दै थिइन् । मान्छेहरुले उनलाई कमरेड भिक्टरको नजिक पुग्नै दिएनन् । बरु उनलाई छेउतिर धकेले । त्यहाँ थिए कमरेड जेनिथ जसले पहिले उनको बिहे गराइदिएका थिए । बिहे गर्ने बेलामा जोशिलो भाषण गरेर शुभकामना दिएका थिए । अहिले जिल्ला अध्यक्ष भएका उनी कमरेड भिक्टरसँगै त्यो गाउँमा आएका थिए । उनलाई समयमै जेनिथ त्यहाँ आएजस्तो लाग्यो र याचना गर्न थालिन्, रोइकराई गर्न थालिन् । तर कमरेड जेनिथ त उल्टै उनीसितै पो कराउन थाले, "बिहे तपाइँले किन तोड्नुभएको?"
उनको कुरा सुनेर निशा आश्चर्यले आँ गरेको गर्यै भइन् । पीडाले गर्दा पुरा आकाशै आफ्नो थाप्लोमाथि खसेर थिचेजस्तो लाग्यो । जेनिथले भन्दै गएकि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि निशाकै तर्फबाट निवेदन परेको थियो । त्यसपछि तीन जनाको समिति बनाइएछ जसले छानबिन गरेर कमरेड जेनिथ र निशालाई सम्बन्ध विच्छेदका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेछ । त्यसको लगत्तै कमरेड भिक्टरले आफ्नै निजी सचिव कमरेड सीमासित विवाह गरेका रहेछन् । निशाले आफुले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि निवेदन नहालेको र सोबारे कसैले आफुसित कुनै सोधखोज नगरेको भनेर आफ्ना कुरा सुनाउन नपाउँदै कमरेड जेनिथ नवविवाहित दम्पत्तिका लागि शुभकामना दिन हिँडिसकेका थिए ।
त्यसपछि कामरेड निशाले आफु वरिपरि जताततै निशा अर्थात अँध्यारोमात्र देखिन् । अनि हुत्तिँदै मेरो छेउमा आइपुगेकि रहिछिन् । उनलाई गम्लँग अँगालो हालेर एकछिन भएपनि सान्त्वना दिन मन लागेको थियो मलाई । तर म परेँ चल्न, बोल्न नसक्ने । आफैँलाई धिक्कार्दै बसिरहेँ । उनी एकछिन मेरै छेउमा बसिन् । तर उनमा एक प्रकारको अस्थिरता थियो । हेर्दाहेर्दै उनले भने एउटा नाम्लो निकालिन् । उत्तरतर्फ तेर्सिएर गएको मेरो हाँगामा रसीको पासो थापिन् र मेरै आँखा अगाडि झुण्डिएर आत्महत्या गर्नपुगिन् । मैले सोच्न नपाउँदै उनी छट्पटाएर यो सँसारबाट बिदा लिइन् ।
बिचरा निशा! ती क्रान्तिकारी, बहादुर र सिद्धान्तनिष्ठ योद्धा । राजनीतिक क्रान्तिमा त सफल थिइन् तर आफ्नै जीवनसित पराजित भइन् । कुनै उपाय नदेखेपछि पाशो लगाएर मरिन् । त्यो पनि मेरै हाँगामा । देख्नसक्ने जति सबै देखेँ । सहनसक्ने जति सहेँ । त्यसैले अब त मलाई पनि छिट्टै काल आए हुन्थ्यो, मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।
Posted by Indra Dhoj Kshetri at 9:30 AM
Daharath Shah February 12, 2013 at 12:26 PM
yo biyogant bho katha, kasai kasaiko jiwanima milan sakchha.. positive liyos sabaile..
Mahesh Sagar Khanal February 12, 2013 at 12:27 PM
मन छोयो | धेरै सत्यघटनाको नजिक छ यो कथा | यस्तै परिस्थिति मैले आफैले देखेको छु